Ime gị ọrụ ọkọkpọhi mfe na map na nsio dị na iMovie. Isiokwu a ga-egosi gị kwụpụ site nzọụkwụ usoro iji nweta ngwá ọrụ na tinye ọkachamara anya n'ụlọ gị na fim. Ma nke mbụ ka anyị nwere mkpirikpi nnyocha nke ihe iMovie bụ ihe niile banyere.
iMovie maka Mac-enyere ị na-enwe n'ụlọ gị gị na fim, na-agbakwunye fun ka ntụrụndụ. Ọ bụ mfe na-agagharị na fim na iMovie, na-ekerịta ọkacha mmasị gị videos na-eke enwekwukwa na elu definition Hollywood imezi trailers. Obere vidiyo na-haziri na otu ebe, na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji chọgharịa, njikere dezie na-akpali akpali na-ekiri.
Agbakwụnye Background ka iMovie on Mac
Olee otú tinye foto dị ka imovie Bbackground
1. N'ihi na-agbakwunye ndabere ma ọ bụ map nke ọchịchọ gị, ike a ọhụrụ oru ngo ma ọ bụ na-emeghe otu dị na otu. A nwere ike mere site na ịpị a nnukwu gbakwunyere bọtịnụ na n'elu aka ekpe nke ngwa. E nwere ihe abụọ nhọrọ dị; ị nwere ike ịmepụta ma a fim ma ọ bụ a ụgbọala na-adọkpụ. Gaa maka ike a nkiri na họrọ Mba Theme si isiokwu menu. Mgbe-emecha usoro a, ị ga-nyere nhọrọ nke na-azọpụta ngo n'ime ihe ọ bụla ihe ugbua ẹdude gị n'ọbá akwụkwọ. N'agbanyeghị ihe ị na-ahọrọ, ị nwere ike mfe tinye mkpachị azọpụta mmadụ ọ bụla na gị n'ọbá akwụkwọ.
2. Pịa na chọrọ clip na ihe omume na-gbakwunyere ịrịba ama. Tinye anọ sekọnd nke clip ngo site na ịpị gbakwunyere ịrịba ama. The gbakwunyere ịrịba ama arụ ọrụ dị ka a nhọrọ-malite eku. Kama, ị nwekwara ike pịa na ịdọrọ ịhọrọ akpan akpan ego. Resize nhọrọ site na-adọkpụpụta ya n'ọnụ n'ihu na ịpị na gbakwunyere bọtịnụ.
Mgbe ị ọma kwukwara ole na ole mkpachị ngo, nye ha a aha. Ị nwere ike ịhọrọ ndabere ma utu aha bụ ndabara etinyere na dịbunụ clip.
3. Na ala aka ekpe na ngalaba nke interface, họrọ map na ndabere. Ọ ga-ịgbanwee gị họrọ omume mkpachị na a dịgasị iche iche nke static na animated nzụlite na ụwa map dị ka mma. Ị nwere ike ịchọta animated ndabere na anọ ndị mbụ nke nyere ndepụta. Ịlele ihe ndabere ngagharị anya dị ka, hover cursor si ikike ekpe ma ọ bụ ekpe gaa n'aka nri. Ị nwere ike ma abụọ pịa họrọ otu ịgbakwunye ma ọ bụ, dị nnọọ ịdọrọ ya n'ebe ọ bụla ị chọrọ ebe.
4. Site na aha menu dị na sidebar, ị nwere ike họrọ a utu aha nke na a kọwara n'ihu. Iji nsio bụ ezigbo ụzọ iji na-aha-enweghị muddling na Obere vidiyo ị họọrọ. Ọ bụ oké ọgbaghara mgbe footage abịa na aha na adọpụ echiche. Oge ụfọdụ, mgbe footage comprises nke ihu, aha-abịa na ụzọ. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị nwetara ọ bụla odida obodo gbaa i nwere ike na-ekpuchi a aha n'elu, ndị a nsio enye oké ọzọ. Mgbe-emecha a nzọụkwụ,-aga azụ ka map na ndabere ngalaba.
Tinye agba ndabere iMovie
1. Iji tinye agba ka ndabere na iMovie, ike agba mkpachị iji dị ka a mgba ọkụ n'elu ke nsio maka captions ma ọ bụ utu aha. The agbakwunye elu nke na agba na ndabere bụ ime ka ọ ọzọ nkà na mma. I nwekwara ike dochie nwa agba oghere n'etiti abụọ Obere vidiyo.
2. Ọ bụrụ na e ọ bụla ẹdude ide ohere n'etiti abụọ mkpachị na usoro iheomume, iMovie nwere ike mfe ike a nwa agba clip jupụta ohere. Ọ bụ kwesiri ngosi na clip echiche mode. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-eji dochie nwa agba na onye ọzọ, abụọ pịa nwa agba clip imeghe clip Ama. Pịa agba igbe ịhọrọ ọzọ na agba na pịa "Set".
Ị nwere ike ịchọta dịgasị iche iche nke siri ike na agba na-akpụ akpụ nzụlite na tinye a dị mfe agba etiti ka dị oru ngo.
Top Sites Iji Download iMovie n'Otu
Nke a na saịtị bụ kpam kpam free na ị nwere ike ibudata looping nsio na-eme ka gị onwe gị na kediegwu n'ụlọ nkiri. Ihe kacha mma banyere saịtị a bụ na ọ dịghị ụgwọ-akwụ ụgwọ, na-akparaghị ókè free stof na ngagharị nsio. Ị pụkwara inwe kasị mma ndebiri na na-ekwe nkwa inye kacha ahụmahụ nke nkiri Ndinam oru ngo.
Nke a website na-enye ụfọdụ n'ime ndị kasị mma elu definition nsio niile maka free. Ọ dị mfe ibudata na a oké saịtị maka free isi iyi. Ọ bụrụ na ị na-achọ free stof, e nwere ihe yiri nke a na saịtị. Ị nwere ike ịchọta dị iche iche edemede dị ka osimiri na mmiri, ọdịdị na ụmụ anụmanụ, ụgbọ njem, egwuregwu, ezumike na n'oge a kara aka, na ndị mmadụ.
Ọ dị mfe ịnyagharịa saịtị a maka free looping nsio. E nwere nnukwu collection nzụlite maka ụlọ gị nkiri oru ngo. saịtị na-agụnye karịsịa okpukpe stof ma e nwere ọtụtụ ihe anya na-achọpụta na. Debanye aha bụ kpam kpam free. Ọ dịghị mmachi ka ọnụ ọgụgụ nke downloads site ọrụ.
Nke a website awade ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị elu definition na elu àgwà nsio si ike nke n'elu-atụle. Ọ dịghị mkpa na-aga site ọ bụla hassles nke dejupụta ogologo iche-iche na-onwe gị aha. Ị nwere ike ma na-enye adreesị email na Debanye aha ma ọ bụ jiri Facebook akaụntụ na-aha. Ozugbo i aha, ị nwere ike ibudata dị ka ọtụtụ mkpachị dị ka ị na-amasị-enweghị akwụ ụgwọ a dime. E nwere mgbe ihe ọhụrụ na oseose ibudata n'ihi na saịtị ahụ na-emelitere na kwa ụbọchị.
Saịtị a bụ ịtụnanya, pụtara na nnukwu na-abịa na free amụọ. Ọdịnaya dị na saịtị a bụ nke elu àgwà na nnọọ ọkachamara. E nwere otutu textures, gburugburu na agba iji họrọ si. Dị ka aha-egosi, ọ bụ nnọọ okpukpe ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị nanị nanị okpukpe ọdịnaya. E nwere nza nke free looping nzụlite na stof welie ahụmahụ nke iMovie oru ngo. The stof dị na elu definition na ị ga-akwa ụta na ịga na saịtị a. Saịtị a bụ egwu.
> Resource> iMovie> Olee otú iji Maps na nzụlite na iMovie maka Mac